Chautari Daily » रवि प-क्राउ पछि अधिवक्ताकाे यस्तो खुलासा ! कानुन नै त्रुटिपूर्ण हेर्नुस् भिडियो
रवि प-क्राउ पछि अधिवक्ताकाे यस्तो खुलासा ! कानुन नै त्रुटिपूर्ण हेर्नुस् भिडियो
काठमाडौं। न्यूज २४ टेलिभिजनमा सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम चलाउँदै आएका रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरिएपछि अहिले यस विषयमा बहस तातेको छ । उनलाई चितवन जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको छ र अहिले थुनछेकको बहस सकिएको छ र पाँच दिनको लागि म्याद थप गरि हिरासतमा राखिएको छ । अबको कानुनी प्रक्रिया के हुन्छ भन्नेबारे धेरैको चासो छ ।
पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले रविलाई पक्राउ गरेको हो। शालिकरामले केही समयअघि मात्र न्यूज २४ टेलिभिजन छाडेका थिए । शालिकरामले मर्नुअघि रेकर्ड गरेको भनेको भिडियोमा रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र रुकु भनिने अस्मिता कार्कीमाथि आफूलाई आत्महरुया गर्न बाध्य पारेको आरोप लगाएका थिए । यही भिडियो सार्वजनिक भएपछि रविलाई अनुसन्धानको लागि पक्राउ गरियो ।
यसरी पक्राउ गरिएपछि सबैभन्दा पहिले अदालत पेश गर्ने व्यवस्था रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता बाेर्णबहादुर कार्की बताउनुहुन्छ । सोही व्यवस्था अनुसार आज उनलाई अदालत पेश गरिएकाे हाे । प्राप्त जानकारी अनुसार भिडियो बुधबार मात्र सार्वजनिक भएको भए पनि यो भिडियो प्रहरीले भने पहिले नै प्राप्त गरेको थियो । पत्रकार पुडासैनीको मोवाइलमै यो भिडियो भएको बताइएको छ । भिडियो भेटिएपछि यस विषयमा प्रहरीले केही अनुसन्धान गरिसकेको छ ।
रविको आफ्नै र उनको टिमका सदस्यहरुका मोवाइलको प्राविधिक अनुसन्धान पनि भइरहेको छ । आज अदालतमा पेश गरेको प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत रविसहित तीनै जनालाई केही दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति पाइसकेकाे छ । कानुनअनुसार २५ दिनसम्म यसरी हिरासतमा म्याद थप्दै राख्न सकिन्छ । यसका लागि अदालतले अनुमति दिनु पर्छ । प्रहरीले कत्तिको बलियो आधार र प्रमाण पेश गर्छ त्यसका आधारमा अदालतले आदेश दिने हो । प्रहरीको आधार प्रमाण कमजोर भए अदालतले रविलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जरुरी छैन भनेर अनुमति नदिन पनि सक्छ ।
प्रहरीले पेश गर्ने प्रमाणका आधारमा अदालतले तीनमध्ये एक आदेश दिन सक्छ । आधार प्रमाण बलियो देखियो र रवि दोषी भएको सम्भावना बढी भएको अदालतलाई लाग्यो भने न्यायिक हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउने आदेश दिइने सम्भावना हुन्छ । रवि दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने प्रस्ट देखिएन तर उनी दोषी नभएको वा भएको सम्भावना आधाआधिजस्तो भयो भने धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिइने सम्भावना हुन्छ । यदि रवि दोषी भएको भन्दा निर्दोष भएको सम्भावना बढी देखियो भने साधारण तारेखमा पनि छाड्ने आदेश दिइन सक्छ । यद्यपि आज अदालतमा रविका समर्थकले ठूलै विरोध गरेका छन् । उनीहरुले रविलाई निःशर्त रिहा गर्न माग गरेका छन् । सामाजिक संजालमा पनि चर्को दबाब छ । यस्तो स्थितिमा यो दबाबले अदालतको आदेश फरक पार्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । तर, यो विषयमा यत्तिकै भन्न सकिँदैन ।
अब थप अनुसन्धान अगाडि बढ्नेछ । अनुसन्धान सकिएपछि प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ । कानुनमा आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिने र आत्महत्या गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था कानुनमा छ । रवि दोषी हुन् वा होइनन् अदालतले ठहर गर्ने विषय हो । उनी निर्दोष ठहरिए आरोपमुक्त हुनेछन् ।
प्रकाशित मिति ३१ श्रावण २०७६, शुक्रबार १३:५३
टिकटक प्रयोगकर्ताहरुको लागि खुसीको खबर ( हेर्नुहोस् )
बढ्यो अमेरिकी डलरसहित अन्य देशको विनिमयदर, कुन देशको कति हेर्नुहोस्
फेरि ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति ? हेर्नुहोस्
यी देशहरुमा हवाई उडान खोल्ने निर्णय
साउदी, युएईलगायत यि मुलुकमा हवाई उडान संचालन गर्ने निर्णय
मलेसियामा रहने नेपाली श्रमिकहरुको लागि आयो यस्तो खवर ( हेर्नुहोस् )
स्याङ्जामा जीप दुर्घटना, १ जनाको ज्यान गयाे, ६ को अवस्था गम्भीर
बाढीबाट सिन्धुपाल्चोकमा ७ जनाको मृत्य : मेलम्ची बजार डुब्यो, बेपत्ताको खोजी कार्य जारी (फोटो फिचर)